तपाईं हामीलाई भन्नुहोस्3वर्ष6महिना पहिले #7
त्यसो भए, सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम डेभिड हो र म नयाँ फोरम मोडरेटर हुँ। मैले सोचें कि यहाँ केहि गतिविधि किक-अफ गर्न उत्तम तरिका भनेको यो विषय खोल्नु हो र तपाई सबैलाई भेट्नु हो।
के कहिल्यै तपाईंलाई लाग्छ कि महत्त्वपूर्ण छ तपाईं हामीलाई भन्नुहोस्।
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: rikoooo, PADA52, Ricbru, txrace
तपाईं हामीलाई भन्नुहोस्3वर्ष6महिना पहिले #14
को Rikoooo टोलीमा स्वागत छ,
I'am एरिक सृष्टिकर्ता र Rikoooo.com को प्रबन्धक।
म यहाँ साँच्चै खुसी छु, यो तपाईंको फोरम छ। तपाईं मालिक हुनुहुन्छ
म यो नयाँ मंच बारेमा सबैलाई बताउन हाम्रो अर्को समाचार पत्र मा एक annouce गर्नेछ।
धन्य उडान सबैलाई
तपाईं हामीलाई भन्नुहोस्3वर्ष6महिना पहिले #15
नमस्ते, मेरो नाम Aan छ
म इन्डोनेशिया बाट एक हवाइजहाज उत्साही छु
सबैलाई भेट्न राम्रो लाग्यो
तपाईं हामीलाई भन्नुहोस्3वर्ष6महिना पहिले #16
हालसम्म धन्यवाद। भविष्यमा यहाँ धेरै, धेरै पोस्ट र धेरै गतिविधि हेर्न आशा।
अन्तिम सम्पादन: द्वारा Dariussssss.
तपाईं हामीलाई भन्नुहोस्3वर्ष5महिना पहिले #35
नमस्कार मेरो सबै नाम टेरी (एफसीएआईआर) म एक सेवानिवृत्त यूएसएएफ क्रू चीफ हुँ। भर्खर रुचि भयो FSX र सिम धेरै वर्ष पछि उडान। उत्तम नयाँ साइट, उत्तम डाउनलोडहरू। सबैलाई खुशी उडान
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: rikoooo, Gh0stRider203
तपाईं हामीलाई भन्नुहोस्3वर्ष5महिना पहिले #36
नमस्ते - म युकेको दक्षिण तटबाट जोन हुँ। अब सेवानिवृत्त भएको छ, मेरो पहिलो उडान सिम्युलेटर ZX81 मा चलाइएको थियो, टेप द्वारा लोड गरिएको, र B737 (राम्रोसँग alimeter र ASI) लाई समावेश गर्दै ब्लक ए र ब्लक बीको बीच उडान गर्ने धेरै ब्लक ग्राफिक्सले प्रतिनिधित्व गर्दछ - र यदि तपाईं यो सही भयो तपाईंले "दृश्यावलोकन" देख्नुभयो, सी काली प्रेरणादायक सामानहरू भन्ने अर्को अर्को कालो ब्ल्याब। त्यसबेलादेखि मसँग प्रत्येक उडानहरू छन् जुन माइक्रोसफ्टले उत्पादन गरेको छ, computers०8086 देखि 384 486,7152, पेन्टियम, थप केहि थप कम्प्युटरहरू मार्फत प्रगति गर्दै, मेरो वर्तमान आई to मा। मैले एउटा निजी इजाजतपत्र पाएको छु जसमा मसँग १ hundred२ र PA28 मा दुई सय घण्टा छ - यहाँ युकेमा उडानको लागतले गर्दा हालको छैन। मेरो छोराले पनि उडानहरू प्रयोग गर्‍यो, बग पायो र उडान गर्न सिके, र अब real००० घण्टा उसको बेल्ट मुनि (वास्तविक) ए 4000 १ / / 319२० मा उसको कप्तानको टिकटको लागि जाँदैछ। फ्रीवेयर क्यानरी टापु दृश्यहरु द्वारा Rickoooo भर आए जुन धेरै प्रभावशाली छ - यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फ्रान्सबाट Great० माईल भन्दा टाढाको जीवनशैलीको बावजुद अ from्ग्रेजी पृष्ठ देख्न पाउँदा उनीहरूको भाषा बुझ्ने राम्रो छैन।
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: rikoooo, alogie
अन्तिम सम्पादन: द्वारा विस्काउंट.
तपाईं हामीलाई भन्नुहोस्3वर्ष5महिना पहिले #37
नमस्ते FCAIR र विस्काउंट,
आफ्नो प्रस्तुति लागि धन्यवाद र नयाँ मंच स्वागत, हामी धेरै उत्साहित र तपाईं नयाँ विषयहरू पोस्ट र समुदायमा मदत माग्न नहिचकिचाउनुहोस्, यहाँ खुसी छन्। साथै, तपाईँले यसलाई महान हुनेछ अरूलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो ज्ञान धेरै स्वागत यहाँ छ, र हामी केही कसरी गर्ने, उडान पाठ, Tutorials छ र यति मा मंच मा पोस्ट प्रेम थियो। हरेक योगदान समुदायको खुसी बनाउन हुनेछ।
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: विस्काउंट, FCAIR
तपाईं हामीलाई भन्नुहोस्3वर्ष5महिना पहिले #39
यस बिन्दुमा म त्यति धेरै विद्यार्थी हुँ जस्तो म अहिले कहिल्यै भएको छैन। यसले मलाई सबै ईन्स र आउटहरू प्राप्त गर्न केहि समय लिन सक्दछ FSX तर कुनै पनि बेला मैले कसैलाई मदत गर्न सक्दिन। यो मेरो लागि धेरै खुशी हुनेछ।
नीलो आकाश सबैलाई ..
तपाईं हामीलाई भन्नुहोस्3वर्ष5महिना पहिले #44
फेरि, Rikooo स्वागत छ।
तपाईं हामीलाई भन्नुहोस्3वर्ष4महिना पहिले #153
हियाको, मेरो नाम स्क्रिन नाम PAYSON हो। म अब धेरै समयसम्म कम्प्यूटर सिम्युलेटरहरू प्रयोग गरिरहेको छु, उबिसहाट स्टुरमोभिक IL2 को प्रयोग गरिएको प्रतिमा फर्काउन। वारबर्ड्समा 10 वर्षमा सारियो (वास्तवमा उनीहरूलाई उनीहरूलाई खेलमा पेश गर्न चाहने एक लडाईको कुकपिटको साथ सहयोग गर्दछ। मैले पनि यूबीआईएसएफ्टको थप उन्नत लडाई सिम खेलिरहेको केही बाह्य यन्त्रहरू पनि चलाएका थियौं। अझै पनि खेल्न। (महँगो हुन्छ) मैले प्रयोग गरेको छु FSX लगभग 8 वा9वर्षको लागी र उनीहरूको ढाँचाको साथ प्रेममा पसे। म अझै पनि WoT संग संलग्न छु र अझै पनि Ubisoft मा गोली-इ-अप। अब कि मैले तिम्रो बारेमा थाहा पाएको छु, उडान गर्न विमानहरुको एक विशाल चयन गर्न ठूलो छ।
फिर्ता बादल गर्न,